မောင်ပါလ: အသားထဲကလောက်ထွက်သော ပြည်ပရှိ မြန်မာမီဒီယာများ
အနုပညာကြောင့်မြေကမ္ဘာ လှပနေတာဆိုရင်ခဲတံတချောင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မျဉ်းတကြောင်းလောက်တော့ ဆွဲခဲ့ချင်တယ်။မောင်ပါလ
မကွေးတိုင်းရှိ ခြောက်ပင်ရွာနှင့် ပေါက်လေးပင်ကျေးရွာပိုင် မြေနုကျွန်းပြဿနာ
ကျုပ် သတင်းစာသမားဘ၀က သတင်းစာတွေကို "ပြည်သူတို့၏ စကားပြန်" ရယ်လို့ ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ပြည်သူအများ ခံစားနေရတာတွေ၊ ပြည်သူအများ လိုလားနေကြတာတွေ၊ ပြည်သူအများ ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြတာတွေကို သတင်းစာတွေက စကားပြန်ပေးနေကြတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ ဟု ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
"သတင်းစာဆရာဆိုတာ သတင်းစာပညာကို အမှန်တကယ်တတ်ကျွမ်းပြီး သတင်းစာဆရာတယောက်ရှိရမယ့် ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ ပြည့်စုံစွာနဲ့ ဒီပညာနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုပြီး ပြည်သူကိုအကျိုးပြုမယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာ လူ့ဗြဟ္မာကြီးတွေပါ။" ဟု ၀ါရင်သတင်းစာသမားကြီးများကလည်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
သို့သော် မြန်မာပြည်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသော ဘင်္ဂါလီကုလားများ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများမြေပေါ်တွင် အကြမ်းဖက်ကျူးကျော်မှုနှင့်ပတ်သတ်၍..........
ပြည်ပမီဒီယာများသည် သတင်းစာကျင့်ဝတ်ကိုဖောက်ဖျက်ကာ ၀ါရင့်သတင်းစာဆရာကြီးများ၏စကားကို ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ပြုကြလေပြီ။
ပြည်ပရှိ မြန်မာမီဒီယာများသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသားအပေါင်းတို့၏ ဆန္ဒသဘောထားနှင့်ဆန့်ကျင်ကာ တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအပေါ် သစ္စာဖောက်လျက်ရှိလေပြီ။
ပြည်ပမီဒီယာများသည် ဒေါ်လာမျက်နှာတခုတည်းကြည့်ကာ မြန်မာပြည်ကို အိုးမည်းသုတ်လျက် ရှိကြလေပြီ။
ပြည်ပမီဒီယာများသည် ဘင်္ဂါလီကုလားကို အဖေခေါ် အမေကျော်ဒွေးတော်လွမ်းကြလေပြီ။
အကုသိုလ်မျိုး စိတ်ယုတ်ဆိုးကိုကြိုးကြိုးစားစား ရေးသည့်အားကြောင့်အများလူပေါင်း စိတ်ယုတ်ပြောင်း၍စိတ်ကောင်းရစေ................ရှင်ဇနကာဘိဝံသ
လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဟာ သူဖြတ်သန်းလာတဲ့ခေတ်ကာလရဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန်အပေါ် သူဘယ်လောက်ထမ်းဆောင် ကျေပွန်လဲဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်တယ်။(ဗန်းမော်တင်အောင်)
About NLD-LA (Malaysia)
Maids from Malaysia
မင်းတို့ရှေ့ က အစိုးရအဆက်ဆက် အသုံးမကျလို့ညံ့လို့…. ငါတို့အစိုးရက ကြားဝင်ဖြေရှင်းပေးနေရတယ် ….
ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုကုသနေမှန်းမသိတဲ့ ဆေးခန်းတွေ (မောင်ဝံသ)
Sungai Bulohတွင် မြန်မာအချင်းချင်း အကြွေးတောင်းရာမှ ဓားထိုးမှုဖြစ်ပွား
ဇတ်ညွှန်းထဲမှာ မပါတဲ့ ပြကွက် ဘဝကို လာ လာ ပတ်သက်တယ်
ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ဆွေးနွေးချက်
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများ စုံစမ်းရေးကော်မရှင် အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း
စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဓါတ်တော်တိုက်က မဟာသင်္ကြန်ပွဲကို Yeo's Building မှာ ဧပြီ ၁၄ ရက် ၂၀၁၃ နေ့ကျင်းပတာပါ။ရင်သွေးငယ်ကလေးများ အဖွဲ့ရဲ့-ဖျော်ဖြေမှုကို-အထူးပြု-တင်ဆက်ထားပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဂျပန်ရောက် မြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲ...